PVC & WPC rindrina tontonana
Indrindra indrindra ny famokarana manarona ny ravaka isan-karazany fitaovana, fitaovana fanorenana, isan-karazany ny gitara, gitara melamine miatrika sy ny sisa
Ny tsipiriany rehetra dia mora tezitra!
Asa tanana rehetra tanteraka!
Handova ny fikatsahana ny tsara indrindra ao amin'ny fanahy ny orinasa, Aoka ho samy hafa izao tontolo izao noho ny Dalu Wood.
Fa mihoatra ny 15 taona, Shandong Golden Continent Decoration Fitaovana Co., Ltd dia matihanina mpanamboatra sy mpivarotra, manokana ao amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana sy ny famokarana. Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana, dia ho nampitoetra mafy orina ny fiaraha-miasa maharitra fifandraisana amin'ny mpanjifa maro hafa firenena. Isika Shandong miorina ao amin'ny mety fitaterana fidirana.
Main manarona entana isan-karazany ny PVC kobany sy WPC kobany, ao anatin'izany ny: PVC taratasy vita tamin'ny marbra, PVC rindrina tontonana, WPC tontonana sy ny sombin-javatra PVC birao, sns Ny orinasa dia natokana mba hanomezana haingon-trano amin'ny rindrina kobany ambony kalitao. Consumer fahafaham-po lehibe indrindra dia ny antony manosika ho an'ny fanatsarana mitohy!
Izao tontolo izao ho tia Shinoa entana
haingon-trano mombamomba Tall Great Wall tontonana wpc amin '...
Material plastika sy ny hazo Technolog ...
Material HAZO, PVC, ADDITIVES Technol ...
Material hazo sy plastika ankapobeny ...
PVC Film niatrika sombin-javatra PVC board / taratasy ho an'ny rindrina e ...
1.Specifications: sombin-javatra PVC Board In ...
Mafy orina PVC Forex Sheet 1.22 * 2.44m fotsy celuka t ...
1. Specifications: sombin-javatra PVC Board ...
Taratasy vita tamin'ny marbra PVC rindrina fandravahana tontonana
1. rafitra sy ny fepetra arahana: Nam ...
Fa mihoatra ny 15 taona, Shandong Golden Continent Int'l Trade Co., Ltd dia matihanina mpanamboatra sy mpivarotra, manokana ao amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana sy ny famokarana. Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana, dia efa miorina mafy orina ny fiaraha-miasa maharitra fifandraisana amin'ny mpanjifa maro avy any ivelany ...
PVC Wall Panel, Plywood Exporter, PVC haingon-trano Sheet, Composite Plywood, Film niatrika Shuttering gitara, Best Price Commercial gitara,